Dhaqaatiir shaqo loo diiday dalka Britain - BBC Somali - Warar
Dhaqaatiir shaqo loo diiday dalka Britain
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 19 Oktoobar, 2013, 18:19 GMT 21:19 SGA
Baaritaan lagu sameeyay isu dheelitirka howlaha dhaqaatiirta ayaa lagu ogaaday in dhaqaatiirta ka soo jeeda dadyowga laga tirada badan yahay ee dalka Britain laga jecel yahay kuwa cadaanka ah.
Baaritaan lagu sameeyay isu dheelitirka howlaha dhaqaatiirta ayaa lagu ogaaday in dhaqaatiirta ka soo jeeda dadyowga laga tirada badan yahay ee dalka Britain, laga jecel yahay kuwa cadaanka ah, taasoo keento inay imtaxaanaadka ku guuldareystaan Britain.
Qoraal madax bannaan oo laga sameeyo imtaxaanaadka Britain ayaa lagu sheegay in golaha guud ee caafimaad-ka (GMC) ay soo gaartay dacwada boqolaal qof oo ka soo jeeda dadyowga laga tirada badan yahay, oo sheegay in marka la sameynayo tijaabada baraatikada ah uu jiro midab kala sooc iyo faquuq.
Divya Talwar ayaa ka warameysa.
Koonfurta Suudaan oo askar UN lagu dilay
Dacwad oogaha ICC: Ma hayo caddeymo ku filan dacwadda Uhuru
Wiilasha Mubaarak oo "dambi ma leh"